Tag: 2014 Condị tọghatara Report | Martech Zone
Tag: Formdị Mgbanwe 2014dị XNUMX
Anyị abụrụla ndị enyi na ndị agba (na ndị mmekọ) nke Formstack kemgbe mmalite akwụkwọ a. Enwere otutu ihe omuma na ulo oru ha ma ha anọgide na-eche banyere ndi ahia ha ma nye ha nnukwu ihe. Ha ka gosiputara ụfọdụ ihe ịtụnanya mara mma mgbe ha na-enyocha ma na-enyocha mgbanwe maka ihe karịrị ndị ahịa 400,000 na ndebanye ndebanye nde ha. Maka nkọwa zuru ezu, budata Akuko mgbanwe nke 2014 Formstack. Akụkọ ahụ bụ nchịkọta nke data na